Mareykanka oo muwaadiniintiisa uga digay inay u safraan Somaliland – idalenews.com
Mareykanka oo muwaadiniintiisa uga digay inay u safraan Somaliland
Dowladda Mareykanka ayaa soo saartay baaq ay u jeedineyso muwaadiniinteeda, kaasoo ku aadan in aanay u safri karin deegaanada Somaliland, halkaasoo ay sheegtay inay ka soo fool leedahay qatar xaga amaanka ah.
Hadalkan ayaa ah kii labaad oo dowladaha reer galbeedka ka soo saareen qatar ay sheegeen inay ku soo wajahan tahay dadka shisheeyaha ee ku sugan dhulka Somaliland.
Wasiirka Arrimaha dibada Somaliland Maxamed C/llaahi Cumar oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in hadalka Mareykanka uusan waxba u dhimeyn amaanka deegaanada Somaliland, isagoo xaqiijiyay in wax qal qal ah oo xaga amaanka aanu ka jirin.
Sidoo kale Wasiirka arrimaha dibada ayaa sheegay in hadalka ka soo baxay Mareykanka uu la mid yahay kii Wasaarada arrimaha dibada Britain ka soo baxay, ee ku aadanaa in muwaadiniinteeda ay isaga soo baxaan Somaliland.
Dhinaca kale Madaxweynaha Somaliland Axmed Siilaanyo ayaa shalay u ambabaxay dalka Britain, si madaxda dalkaas uu ugala soo xaajoodo xiriirka labada dhinac oo mugdi galay, iyo hadalkii Ingiriiska oo caqabad ku noqday hankii Somaliland ee ku aadanaa madax banaanideeda.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayo oo gaaray Beledweyn +Sawirro